चिन्तन चौतारी: हार्दिक आभार
मेरो जाडो बिदा सुरु हुनु अगावै मैले बिदालाई सकेजती सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने सोंच बनाएँ । तर, कसरी र के गर्ने भन्ने प्रश्नको चित्त बुझ्दो उत्तर भेट्न सकेको थिएन । एकदिन मनमा यो गर्ने र त्यो गर्ने सोचिरहेको बेला बुवाको सम्झनामा संस्मरण लेखेर बिताउने सोचें । तर मलाई त्यो काम गर्न त्यती सजिलो छैन भन्ने राम्ररी थाहा थियो । हरेक दिन शोकमा डुबेर भावनासँग खेल्नु पक्कै चानचुने आँटले हुने थिएन । भित्र भित्रै जबर्जस्ती डबाएर राखेको पिडालाई कोट्याउनु आँफैलाई दुख्नु थियो । मैले भर्खरै पिडा कति दुख्छ, कति पोल्छ भन्ने अनुभव गरिसकेको थिएँ । फलत: मैले केही समय केही पनि नलेखेर बस्ने निधो गरेको थिएँ । मनमा लेख्नुपर्छ भन्ने भए पनि मानसिक रुपमा भने अझै लेख्न सक्ने भैसकेको थिएन । त्यसैले, बरु अरु नै काममा समय खर्चिनु बदी उपयुक्त हुने सोचें ।
मैले जुलाईदेखी ब्लग लेख्न पनि थालेको थिएँ । निरन्तर रुपमा लेख्ने नगरेको भए पनि बेला बेला मनमा आउने भावनाहरु सँग खेल्दा रमाइलो र हल्का हुने गरेकाले ब्लगलाई एउटा डायरी सोचेर लेख्न थालेको थिएँ । स्कुलको सानो कक्षामा हुँदा कथा, कबिता र गीत लेख्न खोज्थें । रोल्पामा हुँदा र पछी दाङमा पढ्ने बेलामा पनि नेपाली शिक्षिकहरुको आशिर्वाद रहिरह्यो । तर, जती कक्षा चड्दै गएँ, त्यसको बिपरित लेख्ने काम भने घट्दै गयो । एस.एल.सी. सम्म आइपुग्दा त झन लगभग बानी हटिसकेको थियो । कारण एउटै थियो, पढाईमा बदी नै समय दिनुपर्ने बाध्यता । काठमाडौंमा कलेज भर्ना भएको केही दिनपछी निबन्ध प्रतियोगिता भयो । लेख्न छाडेको धेरै समय भैसकेको भए पनि साहित्यप्रतिको रुची भने जीबित नै थियो । शिर्षक पनि मलाई मन पर्ने थियो,” समाज परिवर्तनमा विद्यार्थी बर्गको भूमिका “। मैले स्कुल र जिल्लामा हुने सबै प्रतियोगिता भाग लिने र जित्ने गरेको आत्मबिश्वास जगाएर प्रतियोगितामा भाग लिएँ । केही दिन पछी नतिजा आयो, मैले लामो अन्तरालपछी प्रथम पुरुस्कार जितें । त्यो निबन्ध नेपाली शिक्षिका मार्फत कलेज डाइरेक्टर र प्रिन्सिपलसम्म पुगेछ । अनी उहाँहरुबाट सुरु हुँदै सबै विद्यार्थीबाट मेरो राम्रै तारिफ हुनथाल्यो । एकपटक साहित्यप्रतिको मेरो रुची सानोमा झै पुनर्जीवित भयो । तर पढाई र सिर्जनालाई सँगसङै बदाउन नसकेर फेरी पनि निरन्तरता दिन सकेन ।
साहित्यसँग मेरो मिलाप हुन नसकेको भए पनि मभित्र साहित्यलाई माया गर्ने एउटा मन जहिल्यै बाँचिरह्यो । त्यसैले होला, मैले लगातार लेख्ने नगरे पनि जहाँ गए पनि एउटा डायरी र कलम भने सधैं मसँग नै हुने गर्दथ्यो । एकान्तमा कहिले काही जे जसरी आउछ त्यसलाई त्यसरी नै कोर्ने कोशीस गर्दथें । आक्कलझुक्कल डायरी लेखन बाहेक मैले लगभग साहित्यका बिधाहरु बिर्सिसकेको थिएँ । चाइना आइसके पछी साहित्यिक कृतिहरु पढ्ने मौका पनि जुरेन । कहिलेकाही अन्लाईन कथा, कबिताहरु भने पढ्ने गर्दथें । स्कुलका सिर्जनशील दिनहरु सम्झिएर चुक्चुकाउथेँ, लेख्न खोज्दा भने हात चल्दैनथियो । साहित्यिक पारखीहरुसँग त्यती संगत पनि हुनसकेन । यस अवस्थामा मैले साहित्य सिर्जना गर्न करीब करीब माया मारिसकेको थिएँ ।
केही समय अघी फेसबुक मार्फत केही स्रस्ताहरुसँग भेट भएको थियो । तर हाम्रो युनिभर्सिटी नयाँ ठाउँमा सरेपछी नेटको ब्यबस्था थिएन । ५ महिना कोठामा नेट नभएकाले सम्बन्ध त्यही रुपमा बद्न पाएन । त्यसैले, यसपालिको बिदामा नेटको ब्यबस्था पनि भएकाले संस्मरणको अलावा फेसबुक मार्फत साहित्यिक हस्तिहरुसँग चिनजान गर्ने र केही समय पढ्ने, लेख्ने र सिक्ने योजना बनाएँ । लगातारको पढाई र परीक्षाको थकानलाई केही दिन बिसाइसके पछी जनवरीको तेस्रो साताबाट फेसबुकमा केही समय दिन थालेँ । सुरुका दिनमा सहि मान्छे चिन्न र भेटाउन नै केही अप्ठ्यारो भयो । स्थापित र चलेका नामहरु खोजी गर्न थालें तर सबैलाई भेट्न गाह्रो भयो । यसै बखत मित्र अशेष यात्रुसँग सुरुमै भएको आत्मिय कुराकानीले निकै सजिलो भयो । उहाँको रचनामा टिप्पणी गर्नुहुने अग्रज र मित्रहरुलाई फेसबुक मित्रका लागि रिक्वेस्ट गर्दै, उहाँहरुको रचना पढेर जानी नजानी कमेण्ट गर्न थालेँ । आँफैले पनि केही लेखेर ट्याग गर्न थालेँ । हाम्रो प्रत्यक्ष भेट नभए पनि सबैसँग आफुलाई परिचित झै लाग्न थाल्यो । अनी रचना बाँड्ने, पढ्ने, प्रतिकृया लिने-दिने प्रकृया सुरु भएर लगभग मैले डेड महिनाको बिदा बितेको पत्तै पाइन । अरु साथीहरुलाई झन्झत लाग्यो होला तर, मलाई भने यसपालिको बिदा निकै छोटो लाग्यो ।
अहिले सोचिरहेकोछु, हिजो म कहाँ थिएँ आज कुन अवस्थामा छु । मेरो लिस्टमा थोरै परिचित नामहरु मात्र थिए, आज धेरै नामहरु चिनेकोछु । हिजो खाली थिएँ, आज केही भरिएकोछु । धेरै नामबाट म प्रभावित भएँ, केही नामहरु मेरो नामबाट पनि । कसैसँग म आँफैले सम्बन्ध बदाएको थिएँ भने कतिले मसँग । कतिलाई मैले आफ्नो नजिक ठानें त कतिले मलाई । अपरिचित मित्रहरुबाट प्रशंसा र सुझावको म्यासेजहरु निकै पाएँ । मबाट ठुलो आशा गरेर उपयुक्त परामर्शका लागि सम्बन्धको हात बदाउने थुप्रै मित्रहरु पाएँ । मैले जती गर्न सोचेको थिएँ, त्यती गर्न सकिन यद्धपी थोरैबाट धेरै नै पाएको महसुस गरिरहेकोछु । मलाई आजकाल फेसबुक मेरै गाउँको चौतारी जस्तो लागिरहेको हुन्छ, जहाँ म लाँखुरीको शीतलमा बसेर साथीहरुसँग रमाइलो कुरा गर्थें । मेरै समाजमा डुलिरहे जस्तो लाग्छ, जहाँ आफन्तसँग सन्चोबिसन्चो सोद्धै तलमाथि गर्दथें । मेरो चाहनाको एउटा बस्ती भेटेको छु, जहाँ म अशली शान्ती महसुस गर्छु र दुक्क भएर छिमेकीसँग भलाकुसारी गरिरहेको हुन्छु । मैले कल्पना गरेको एक सुन्दर र शालीन बातावरण पाउँछु । फेसबुकमा रहनुभएका बिभिन्न ब्यग्तिहरुको फरक धारणा र बिभिन्न कोणबाट निस्किएका बिचारहरु नियाल्दा नियाल्दै कुनै बैचारिक बहसमा पो छु कि जस्तो भाण हुने गर्दछ । अग्रज स्रस्ता र मित्रहरुका मन छुने भावनाहरुसँग डुबुल्की मार्दा मार्दै म कुनै साहित्यिक जमघटमा पो बसेको छु कि भन्ने आभास पनि गर्छु । म निर्धक्क भएर यि बिचार र भावनामा डुलिरहेको हुन्छु र आफुलाई पनि सामेल गराउने प्रयास गरिरहेको हुन्छु । यथार्थमा, म कुनै न कुनै हिसावले मलाई सिकाइरहेको सोचेर म सिक्न प्रयत्नरत हुन्छु र कुनै न कुनै रुपमा त्यही कतै आँफैलाई पनि खोजिरहेको हुन्छु । यसरी नै आफुलाई सिकाउदा सिकाउदै र खोज्दा खोज्दै बितेका हुन् मेरा यि डेड महिनाका हरेक दिनहरु ।
अब भने पढाई सुरु भैसकेको छ । अन्तिम सेम्स्टेर भएकाले झनै बदी समय दिनुपर्ने हुन्छ । हुन त समयको ब्यबस्थापन गर्न सकिएको खण्डमा अपुग भन्ने हुँदैन जस्तो पनि लाग्ने गर्दछ । तसर्थ, मैले थोरै भए पनि समय भने अबश्य छुट्याउने नै छु । फरक, मैले चाहेरै पनि बिदामा जसरी समय निकाल्न सजिलो हुनेछैन । मैले यस अबधिमा हासिल गरेको मुख्य चिज भनेको श्रदेय अग्रजहरुको मार्गदर्शन, सुझाव र हौशला नै हो । मैले भेटेको कुरा भनेकै स्रस्ता मित्रहरुको प्रोत्साहन, माया र सहयोगी हातहरु नै हुन् । मेरो लागि बहुमुल्य मोती यही साईनो नै हो । मेरो सबैसँग भेट होला नहोला तर पनि म यस स्वच्छ नातालाई कुनै पनि हालतमा तोड्नु वा बिर्सनु उचित ठान्न सक्दैन । तपाईंहरुको प्रेरणाले मलाई पनि भित्रैदेखी केही गर्ने आशा जागेर आएकोछ । कम्तिमा पनि आफ्नो मनका भावनाहरु शब्दमा अभिब्यक्त गर्ने प्रयास जारी राखिरहनु नै मेरो लागि ठुलो उपलब्धी हो । निस्वार्थ सम्बन्ध स्वरुप चिनोको रुपमा पाएको यो उत्साह कहिल्यै गुमाउन चाहन्न । अग्रजहरु बिक्रम सुव्वा, कृष्ण वस्ती, दिपक खड्का, रामकुमार श्रेष्ठ, रमा गौतम, डा. रबिन्द्र समिर, मनु लोहोरुङ, चुम लिम्बु, दीप्स शाह, बसन्त गौतम, दिपक कथित, के.बि. चाम्लिङ, शशी थापा सुब्बा, हेमन्त परदेशी, बिमल गिरी, आशांक उपाध्याय, बासु ढकाल, महेश क्षेत्री, …
मित्रहरु असेष यात्रु, अशोक पार्थिव तामाङ्, तिब्बत दर्लामी, बेदनाथ पुलामी, बि.जे. वान्तवा, चिन्तन शर्मा, निश्प्रभ सजी, बिनय शाह, कोशराज श्रेष्ठ, मधु श्री, किरण टि लिम्बु, तुफान शान्त, मदन डुम्रे, समदर्शी काइँला, बलदेव भट्ट, मनु ठाडा, मिना वान्तवा, राज श्रेष्ठ, अनुकुल प्रकाश, आले माहिला, कृष्ण पाण्डे, सान्निध्य, सौरभ ओली, सानु हजुर, निता पाठक, मोहन पुलामी, बिष्णु प्याकुरेल, सबिता गुरुङ, प्रकाश गौतम, बि.बि. लामा छिरिङ, प्रेम गौतम, केदार श्रेष्ठ, नील बहादुर खड्का, कुल मगर, मनोज मगर, योगेन्द्र थापा, दिपक परीयार, मिना थापा, गिर रोदन, अमिता लामा, ट्रेसा ट्रेसा, नर बहादुर बुढा, दिशरा थापा, खेमराज गाउँले, राजन पाण्डे, बिनय पुन, हिमा पुन, जीवन थापा, धिरेन तुलाधर, लेखनाथ सजग, नरेन्द्र शाह, साहस घर्ती, सोनिया भण्डारी, …
आदरणीय पूर्ण पुन, राजेन्द्र 'राजु' थापा, दामोदर प्रशाद आचार्य, प्रकाश सुनुवार, एली शेर्पा, जे.बि. राई लगायत नाम उल्लेख गर्न नसकेका सम्पूर्ण अग्रज, मित्रजन र शुभेच्छुकहरुमा हृदयदेखी आभार प्रकट गर्न चाहन्छु । म सधैं तपाईंहरुको उत्तरोत्तर प्रगतीको कामना गर्न चाहन्छु । रचनाहरुमा पहिले झै कमेण्ट गर्न नसके पनि सम्भवजति पढ्ने आशा राखेकै छु । यहाँहरुले मेरो फुच्चे बिचारमा दिनुभएको समर्थन, भावनामा दिनुभएको साथ, गल्तिमा दिनुभएको सुझाव, प्रयासमा दिनुभएको हौशला र माया तिरेर तिर्न सक्ने गुण कदापी हुँदै होइन । म सधैं यस्तै साथ र हातहरुको अपेक्षा गरिरहनेछु । आफ्नो शब्द टुङ्याउनु अघी मभित्रको कलिलो बैचारिक मुनालाई सिचाई गरिदिनु हुने र साहित्यनुराग पुनर्जीवित गरिदिनु हुने सबैप्रती कृतज्ञ छु ।
Posted by Chandra Magar at 8:25:00 PM
Yumesh Pulami March 13, 2010 at 3:34 AM
सर्व प्रथम त : यहा लाइ उतर उतर प्रगति र सफलता को कामना गर्द छु र .... बगिंग मा निरन्तरता को कामना नि' गर्दछु !
एउटा राम्रो चौतारी .... छ ...हाम्रो लागि यो ब्लग र फेसबुक ... अनि निकै मज्जाको संगालो रहेछ --- यो पोस्ट भित्र !
prakash April 11, 2010 at 2:56 PM
good i like it .........but nothiing is new...........and so enchanting..........
सान्निध्य (Nepsasa) March 6, 2012 at 11:57 AM
लौ प्रगती सधै यस्तै सकारात्मकताका साथ भैरहोस् । धन्यवाद सदासयताका लागी । मनहरु सबैका सफा हुँदेनन् ।
श्रद्धाञ्जली ! गिरिजाबाबु
श्रद्धाञ्जली ! युगपुरुष